C/raxmaan C/Shakuur: Haddii Guddiga Doorashada ka mid noqonaysa waa in Xarunta NISA lagaa soo hubiyaa | Dhacdo
Home Wararka Maanta C/raxmaan C/Shakuur: Haddii Guddiga Doorashada ka mid noqonaysa waa in Xarunta NISA...
C/raxmaan C/Shakuur: Haddii Guddiga Doorashada ka mid noqonaysa waa in Xarunta NISA lagaa soo hubiyaa
Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka C/raxmaan Cabdi Shakuur Warsame, ayaa eedeyn kulul dusha uga tuuray Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida Somaliya Fahad Yaasiin oo uu ku eedeeyay inuu faragelin toos ah ku haayo arrimaha doorashada Somaliya
C/raxmaan Cabdi Shakuur ayaa sheegay xubnaha ka mid noqday Guddiga doorashada dhamaantood inay soo mareen Xarunta NISA oo laga soo hubiyay, waxaa kale uu sheegay qofkii doonaya inuu ka mid noqdo Guddiyada doorashada in laga soo hubinaayo Xarunta Taliska NISA.
“Haddii aad guddiga doorashada ka mid noqoneyso waa in xarunta NISA lagaa soo hubiyaa, sidoo kale haddii aad xildhibaan dooneyso, waa in cidda damiinka kaa ah aad NISA geysaa. Lacagta Qatar ee xildhibaanka la siinayo waxey taallaa xarunta NISA. Dalka aafadiisa waxey ku soo uruurtay xarunta NISA iyo ninka ka taliya. Hadda ka hor ayaa laga sheegay taliyaha NISA in uu yiri dadkaan iyo deegaankaan Koonfureed Axmad Godane ba waa qabsadee maxaa anigana ii diidaya. Inta NISA xaalkeedu sidan yahay, dalku xasilooni ma leh.”
Xubnaha Mucaaradka dowladda Federalka Somaliya, ayaa ku doodaya Guddiyada Doorashada inay ku milan yihiin xubno ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida Somaliya & Shaqaalaha rayidka dowladda.
Dowladda Somaliya oo arrintaan ka jawaabtay ayaa sheegtay inaysan war ka haynin xubno ka tirsan Nabad Suggida inay ku milan yihiin Guddiyada Doorashada ee heer dowlad Goboled & Heer Federaal.
Mahdi Maxamed Guuleed Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka dalka ayaa eedeynta mucaaradka ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah oo ay ku doonayaan inay xajiimiyaan Doorashada.
Previous articleGuddoomiyaha Baarlamaanka oo magacaabay Guddi
Next articleCiidamada Booliska Puntland oo laba wiil ku dilay Magaalada Boosaaso